सामस क्लबको परिचय साम क्लब भनेको १-1983 मा वालमार्टले स्थापना गरेको गोदाम क्लबहरूको एक अमेरिकी सदस्य मात्र श्रृंखला हो। तिनीहरू किरानेहरू, घरेलु उत्पादनहरू, कपडा, स्वास्थ्य र सौन्दर्य उत्पादनहरू, गहना, इलेक्ट्रोनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टायर, ब्याट्री, र उनीहरूको क्लब सदस्यहरूमा कम मूल्यमा चश्मा। धेरै उत्पादनहरू भन्दा ठूलो आकारमा बेचिन्छ […]
होम डिपोको परिचय गृह डिपो एक अमेरिकी घर सुधार स्टोर चेन हो जुन २,2,300०० स्थान र 400,000००,००० कर्मचारीको नजिक छ। यो कम्पनी जर्जियामा बर्नार्ड मार्कस, आर्थर ब्लान्क, रोन ब्रिल, र पट्ट फराहले १ 1978 .XNUMX मा स्थापना गरेका थिए जसको घर सुधार सुपरस्टोरको दर्शन थियो। धेरै बर्षमा, होम डिपो बढेको छ […]
के अल्बर्टसनले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
अल्बर्टसनको परिचय अल्बर्टसन एक अमेरिकी किराना स्टोर श्रृंखला हो जुन २,२०० भन्दा बढी स्थानहरू र 2,200२325,000,००० कर्मचारीहरू छन्। अल्बर्टसनको स्थापना १ 1939। In मा जो अल्बर्टसनले बोहिस, इडाहोमा गरेका थिए र बर्षौंसम्म बढेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको दोस्रो ठूलो सुपरमार्केट चेन बन्न पुगेको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, तिनीहरूका of2१ स्थानहरू मात्र एल्बर्टसन अन्तर्गत छन् […]
के डलर जनरलले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
डलर जनरल डलर जनरल कर्पोरेशनको परिचय १ variety,२०० भन्दा बढी स्थान र १ 16,200,००० कर्मचारीहरू सहित विविधता स्टोरहरूको अमेरिकी श्रृंखला हो। विविध स्टोरहरू सामान्यतया 'डलर स्टोर' को रूपमा परिचित हुन्छन्, त्यसैले डलर जनरलको नाम। डलर जनरलले किराना सामान, घरको साज सज्जा, कपडा, स्वास्थ्य र सौन्दर्य आपूर्ति, सफाई उत्पादनहरू, घरपालुवा आपूर्ति, खेलौना, मौसमी र ​​स्थानीय चीजहरू बेच्छ, र […]
लक्ष्य ले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
लक्ष्य लक्ष्य कर्पोरेशनको परिचय १,1,900०० भन्दा बढी स्थानहरू र 368,000 1902,००० कर्मचारीहरू सहित एक प्रसिद्ध अमेरिकी फुटकर बिक्री हो। लक्ष्यले किराना सामान, इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा, गहना, फर्नीचर, बगैंचा आपूर्ति, लन उत्पादनहरू, जुत्ता, पाल्तु जनावरको आपूर्ति, खेलौना, साना उपकरणहरू, र सौन्दर्य र स्वास्थ्य उत्पादनहरू बेच्दछन् धेरै अलग स्टोर ढाँचाहरूको प्रयोग गरेर। लक्ष्य १ XNUMX ०२ मा स्थापना भएको थियो जब जर्ज डेटनले एकल […]
के क्रोजरले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
Kroger को परिचय Kroger संयुक्त बिक्री मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा ठूलो सुपरमार्केट अपरेटर हो। तिनीहरू वालमार्ट पछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सामान्य फुटकर बिक्रीकर्ता हुन्। १inc1883 मा cery 372२२ र एकल स्थानको साथ स्थापित एक सिनसिनाटी किराना कम्पनीका लागि खराब छैन। आज क्रोजरसँग २,2,800०० भन्दा बढी स्टोरहरू र 453,000 13,००० कर्मचारीहरू छन्। चाखलाग्दो तथ्य: क्रोजरले १ different बिभिन्न अपरेट गर्दछ […]
के कस्टकोले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
कस्टको कोस्कोको परिचयले विश्वभर मा मात्रै ठूलो-बक्स रिटेल स्टोर सदस्यता को एक श्रृंखला संचालित गर्दछ। यो सस्तो पेट्रोलको साथ कटौती मूल्य ईन्धन केन्द्रको लागि र देश, डीजलको आधारमा तिनीहरूको स्थानहरूको लागि सामान्य छ। कोस्टको revenue०० भन्दा बढी स्थानहरू, २ 5,००० कर्मचारीहरू सहित राजस्वबाट विश्वको पाँचौं ठूलो रिटेल कम्पनी हो र […]
वालमार्टको परिचय वालमार्ट सुपरमार्केटहरू, किराना स्टोरहरू, र छुट विभाग स्टोरहरू को एक वैश्विक अपरेटर हो। सामन्त वाल्टनले पहिलो पटक १ 1945 in first मा प्रयोग गर्न शुरू गरेदेखि उनीहरूको बृद्धि भएको छ। आज, वालमार्टसँग २ 10,500 देशहरूमा १०,2,200,000०० भन्दा बढी स्टोरहरू र २,२००,००० कर्मचारी छन्। वालमार्टलाई प्रायः विश्वको राजस्व र कर्मचारीहरूद्वारा सबैभन्दा ठूलो निजी कम्पनी भनिन्छ। […]
के पनेराले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
Panera Panera Bread Company को परिचय संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा रहेको बेकरी क्याफे फास्ट-क्याजुअल रेस्टुरेन्टहरूको 1 १ श्रृंखला हो। पानेरा बाहेक, तिनीहरू ओयू बोन पेन र सेन्ट लुइस रोटी कंपनी पनि संचालन गर्छन्। केन र लिसा रोजेंथलले १ 1987 XNUMX मा मिसौरीको किर्कवुडमा सेन्ट लुइस रोटी कम्पनी स्थापना गरेपछि उनीहरूको वृद्धि भएको छ। आज उनीहरू […]